Kumnyama ebusweni benkawu! - Bayede News
Kumnyama ebusweni benkawu!
Home » Kumnyama ebusweni benkawu!
Isimo somnotho sibheke phansi futhi azibonakali izimpawu ezethembisayo zokuthi lizophenya izulu. Kuletha ubumnyama obedlulele ebusuku obungenanyezi ukuthi kwehle izehlo ezifuze lezi ezikhungethe iNingizimu Afrika kuleli sonto. Ukushiswa kwamabhizinisi nokucekela phansi kuhlehlisa umsebenzi weminyaka ufane nento engakaze ibe khona.
Ngubani osizakalayo ngalo mkhankaso onxanye, obukeka uphakathi komnyama nomnyama ohlasela ucekele phansi amabhizinisi nemizamo yabantu yeminyaka? Umhlasela ngaliphi umuntu ophethe ikhambi lokukwelapha ube ungalazi ngisho nelilodwa iqabunga leli elingaba wusizo empilweni yakho?
Lo mbuzo ufike engqondweni lapho ngikhumbula kusha amabhizinisi aboHlanga endaweni yaseMlaza kusetshenziswa igama lokungeneliswa yizinto ezazenzeka kupolitiki ngalesiya sikhathi. Abantu ababeshisa, bebulala, bethatha izimpahla kwakungaboHlanga bekwenza lokho ezindaweni zaboHlanga. Kubukeka sengathi abantu ababeqhuba lo mkhankaso babewuhlonipha umgomo ababesebenza phezu kwawo, futhi bewugcina umyalo ababewunikiwe, ngoba amabhizinisi alimala kulesiya sikhathi ngawaboHlanga kuphela. Uma kunomakhelwane wolunye uHlanga onelinye ibala akathelwanga ngisho nangamachaphazelo egazi elalichitheka kulowo mzabalazo. Kwathi lapho kuphela khona lolo dweshu zingasekho izitolo zaboHlanga kwafuneka baye kothenga kulezo zitolo zezinye izinhlanga ngoba zona zazingazange zithinteke. Baye bathi abakhulumayo umlando uyaziphinda kwesinye isikhathi, emveni kweminyaka eminingi.
Kunosomabhizinisi boHlanga abaningi abaguqa ngaleso sikhathi kuze kube namuhla abaphindanga basukuma. Njengoba ngibhala namuhla kunabantu abangazi ukuthi bazothenga kuphi, besaba ngisho ukuphumela emnyango baye kothenga okuya ethunjini. Kunabanikazi bezitolo abavale iminyango bengazi ukuthi bayovula nini, ngoba amabhizinisi akuleyo ndawo abulewe kwashiswa kwathathwa nempahla. Abantu uma befuna ukuya kothenga isinkwa, indawo abangase bathole isinkwa kuyo ayikho eseduze nalapho bakhe khona.
Kulesi sikhathi lapho umnotho uzikile, lapho abantu beswele umsebenzi, lapho iNingizimu Afrika inxenxa abatshalizimali ukuba beze kotshala izimboni kuleli lizwe. Kuyishwa ukuthi isithombe esidlala kumabonakude nasezinkundleni zokuxhumana ngesokuthi alukho uzinzo kuleli lizwe.
Umuntu ozokuba nesibindi sokuza kuleli lizwe azotshala imali yakhe kungaba ngumuntu ongaphili kulo mhlaba lapho izinto zenzeka obala. Uma sikhuluma ngokuvusa umnotho wasemalokishini nasemakhaya kucacile ukuthi kuzokuthi ukuma, silinde size sibe nesiqiniseko sokuthi leyo ngqalasizinda ayizukuphinda ilinyazwe icekelwe phansi ngabanye abanebala elifanayo nelaboHlanga.
Kwakuwumdlalo ojwayelekile emakhaya ukuthi uma kunecece emzini othile kuvele kusuke ishinga lensizwa licishe ilambu kuhleziwe endlini. Lokhu kwakwenziwa ebusuku ngenkathi kungazelele muntu. Ngaleso sikhathi sekumnyama bekusuka isidumo uzithole ushaywa ebumnyameni ungazi ukuthi ushaywe ngubani. Abanye abasebekujwayele ukuzithola bekulesi simo basebewazi amasu abangawasebenzisa ukuze basinde ekushayweni. Ngenkathi kumnyama kukhona ababephumelela ngesu lokuhamba phansi ukuze bangashayeki kanti abanye babelwa bashaye kwasani khona lapho ebumnyameni. Lona ngumdlalo oyingozi kodwa kunamashinga ayewuthanda, futhi babekwenza lokhu ngezinhloso ezithile ukuze bazuze okuthile.
Umsebenzi ungase ube yimbambezela kunganakiwe
Kunezinto ezithile engifisa sibuke kuzo namuhla. Umuntu ocisha ilambu wayekwenza lokhu enezinhloso ezithile: kungenzeka kube uqonde ukuthatha intombi ethile aphume nayo kungaboni muntu, omunye ukwenza lokhu ukuze adunge ukuthula ngoba le nto eyenzekayo akayithandi, kumbe kunomuntu aqonde ukumshaya ebumnyameni, kumbe kunezinye izizathu okungenzeka kube wumdlalo nje kuye. Ngithanda ukugxila kulona ocisha ilambu ngoba ebona into enhle eyenzekayo, umcimbi uhamba kahle, kanti yena ufisa kuvele isithombe esibi ngalo muzi.
Kudingeka ikhambi elisheshayo elizokwelapha likhiphe lolu fufunyane olwenza abantu bagijime bacekele phansi izinto ezilusizo kubo.
nguLindani Dhlomo Sep 6, 2019